Wararka Maanta: Talaado, Mar 20, 2012-Ciidamada Dowladda KMG ah iyo kuwa Raaskaambooni oo dib u Qabsaday Deegaanka Diif ee Gobolka Jubbada Hoose
Ciidamada Dowladda KMG ah iyo kuwa Raaskaambooni oo dib u Qabsaday Deegaanka Diif ee Gobolka Jubbada Hoose Talaado, Maarso 20, 2012 (HOL) — Warar naga soo gaaray deegaanka Diif ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda KMG oo kaashanaya kuwa ururka Raaskaambooni ay dib ula wareegeen deegaanka Diif, oo ay saaka si nabadgelyo ah ku qabsadeen xoogagga Al-shabaab.
Ciidamada dowladda iyo kuwa Raaskaambooni oo ku sugnaa meel aan sidaa uga fogeyn deegaanka Diif ayaa la sheegay in dib isu soo abaabuleen islamarkaasina ay magaalada kusoo qaadeen weerar, waxaana ay taasi keentay in ay magaalada baneeyaan xoogagga Al-shabaab iyadoo uusan wax dagaal ah dhicin.
"Ciidamada Al-shabaab markii ay magaalada soo galeen wax yar ayay joogeen, kadibna dib ayay uga laabtaan, waxaana magaalada soo galay ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Raaskaambooni," ayuu yiri goobjooge ku sugan Diif oo ka gaabsaday magaciisa.
Xaaladda deegaanka diif ayaa haatan ah mid yara xasiloon, iyadoona xoogagga Al-shabaab ee ka baxay magaalada la sheegay in ay ku suganyihiin meel aan sidaa uga fogeyn deegaanka Diif.
Talaado, Maarso 20, 2012 (HOL) — Kulan ay guddiga ammaanka Galmudug maanta ku yeesheen Koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa waxay kasoo saareen dhowr qodob oo ay sheegeen in wax looga qabanayo ammaan-darrada ka jirta deegaannada ay ka taliyaan. Dowladda Kenya oo sheegay in Qoxootiga ku jira Dhadhaab ay Dajinayso Deegaannada ay Ciidamadeedu kaga sugan yihiin Soomaaliya 3/20/2012 7:24 AM EST